Home Wararka Dibada Hub Culus: Imisa waddan ayaa heysata hubka niyukliyeerka, meeqa xabo ayaase taalla...
Hub Culus: Imisa waddan ayaa heysata hubka niyukliyeerka, meeqa xabo ayaase taalla adduunka?
Xilligan oo ay taagan tahay xiisadda u dhaxeysa dalal ku hubeysan nuclear sida Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa sheekadan waxaad wax badan uga fahmi kartaa arrimaha hubka nuclear-ka.
Qaraxyadiisu aad ayey u awood badan yihiin, hal bambo oo nuclear ahna waxay baabi’in kartaa magaalo dhan.
Qumbuladaha nuclear-ka waxay aad uga waxyeello badan yihiin xitaa bambada ugu weyn adduunka ee aan nuclear-ka ahayn.
Waxaa laga yaabaa in aad su’aalo dhowr ah iska weydiiso arrimaha nuclear-ka – laakiin ha walwalin, waxaan isku soo toosinay jawaabaha aad uga baahan tahay inta badan su’aalahaas.
Waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid erayada “atoms” iyo “isotopes”, haddii aad soo dhigatay maadada seyniska – kuwaas ayaa qeyb ka ah hannaanka loo maro sameynta bambooyinka nuclear-ka.
Bambooyinku waxay tamartooda ka helaan atoms-yada oo kala fida ama isu imaada oo si wadajir ah cuf u sameeya. Taasi waa sababta mararka qaar bambaanooyinka nuclear-ka loogu yeero “atomic bomb”.
Hubka nuclear-ka wuxuu sii daayaa xaddi aad u farabadan oo shucaac ah – kaasoo ah mid sababi kara waxyeello badan – sidaas darteedna saameyntoodu waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxa dhaco ka dib.
Hase ahaatee labo jeer oo kaliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida – waxaana lagu dhuftay waddanka Japan, sanadkii 1945-kii, xilligaas oo uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Markaas waxay bambooyinkan sababeen musiibo weyn iyo khasaare nafeed oo laga xishoodo in tiradiisa la sheego.
Sagaal waddan ayaa hadda heysta hubka nuclear-ka, oo kala ah: Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Israa’iil iyo Kuuriyada Waqooyi.
Laakiin marka laga hadlayo in waddamada loo oggol yahay sameysashada hubkan iyo in kale, jawaabta su’aashaas waxay qaadaneysaa sheeko dheer.
Waxaa jira wax loogu yeero is-afgaradka xakameynta hubka Nuclear-ka, oo afka qalaad loogu soo gaabiyo (NPT) – kaasoo ah heshiis looga gol leeyahay in looga hortago faafitaanka hubka nuclear-ka iyo in laga qaado waddamada aan loo oggoleyn.
Shantan waddan waxaa loogu yeeraa dowladaha ku hubeysan nuclear-ka – waana loo oggol yahay inay heystaan hubkaas, sababtoo ah waxay sameysteen oo ay tijaabiyeen ka hor inta aan heshiiska NPT la dhaqan galinin 1-dii bishii January ee sanadkii 1967-kii.
Israa’iil (oo waligeed aan qiranin, ama beeninin inay heysato nuclear), Hindiya iyo Pakistan midna qeyb kama aha heshiiskaas, mana aysan saxiixin.
Tani waxay keentay in sanadkii 2015-kii ay heshiis galaan Iiraan iyo waddamada kale ee quwadaha waaweyn, kaasoo ay Iiraan ku saxiixday heshiis dhigaya inay baabi’iso bacriminta nuclear-ka si cunaqabateynta looga qaado, laakiin Madaxweynaha Mareyaknka Donald Trump ayaa heshiiskaas cagta ku dhuftay bishii May ee sanadkii 2018-kii.
Sida kor ku xusan, waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka nuclear-ka laga baabi’iyo guud ahaan dunida.
Bishii July ee sanadkii 2017-kii, waxay u muuqatay in dunidu ay hal tallaabo u qaadday sidii looga xoroobi lahaa hubka nuclear-ka, ka dib markii ay in ka badan 100 waddan saxiixeen qaraar kasoo baxay Qaramada Midoobay oo dhigayay in si wada jir ah loo baabi’iyo hubkaas, loona mamnuuco.
Sidaas awgeed, inkastoo dunida ay kusii yaraanayaan tirada bambooyinka nuclear-ka, marka loo eego 30 sano ka hor, uma muuqato in mar dhow laga xoroobi doono hubkaas ama si buuxda loo baabi’in doono.
Previous articleXasan Sayyad Khodayi: Saddex arrimood oo ku saabsan sarkaal sare oo lagu dilay Tehran
Next articleShanta arrimood uu Famaajo uga duwan yahay madaxweynayaasha kale
Shirka Golaha wasiiradda Jubaland oo looga hadlay isbadalka doorasho ee ka...
Kenya oo kordhisay duqeymaha dhanka cirka ah ee ay ka fuliso...